Uyu Fat Guy Anoda Coca-Cola Kushambadzira | Martech Zone
Uyu Fat Guy Anoda Coca-Cola Kushambadzira
Mugovera, January 19, 2013 Svondo, Nyamavhuvhu 30, 2015 Douglas Karr
Ini ndapfuura mafuta… pachokwadi, ini ndoda kudzikira huremu hwemurume wepakati kuti ndidzokere pakungova mafuta. Ndinoda kuzvipa mhosva pahutachiona hwangu, genetics yangu, basa rangu, kushushikana kwangu ... chimwe chinhu. Icho chokwadi ndechekuti, hazvo, kuti zviri nyore. Pandinodya zvakanaka uye nekuekisesaiza, ndinorasikirwa nehuremu. Kana ndikasaita maekisesaizi kana kudya zvine mutsindo, ndinoonda. Munguva dzekunetsekana ndipo pandino tendera kusiya hutano hwangu ndobva ndanyura mugomba rakadzika-dzika… uye nguva dzave kunetsa zvakanyanya mumakore mashoma apfuura.
Kuva wakakora hazvirevi nekushaya ruzivo rwehutano kana kunzwisisa kurovedza muviri uye mashandiro anoita muviri. Ini ndinodisa kubheja kuti ndaverenga mamwe mabhuku, ndakatarisa mamwe zvinyorwa uye ndinonzwisisa zvakawanda nezve hutano kune vanhu vazhinji vane hutano. Ini zvakare ndobheja kuti ndarasikirwa nehuremu hwakawanda kupfuura chero munhu… mazana emapaundi pamusoro pemakore. Nehurombo, ini ndakawana akawanda, mazhinji akawanda nekuda kwekushaiwa kwangu kwekuda uye kuisa pamberi pehutano uye chiyero chebasa muhupenyu hwangu.
Kunze kwerudo rwangu rweupfu chena neshuga zvakare rudo rwangu rweInternet nerusununguko. Iyo Internet inopa yeruzhinji nzira iyo munhu kana kambani havafanirwe kumirira vatapi venhau kana hurumende kuti vaise pachena pavari. Iyo kambani inogona kutora zvinhu mumaoko ayo, uye kugadzira yayo yega mameseji - pasina kusefa, maonero, kana kudzvinyirira. Ndosaka ndichida icho chokwadi chekuti Coca-Cola iri kugadzirisa njodzi dzehutano inosangana nezvigadzirwa zvayo musoro mune yakateedzana yezvishambadziro zvitsva.
Tiri kurarama munyika umo chero chinhu chikaenda zvisirizvo, tinonzwa zvirinani nezve kunongedza minwe uye kupomera mumwe munhu pane kuongorora kuti isu pachedu tinokanganisa sei shanduko. Makambani ari nyore kutariswa, kunyanya kana ivo vachiita zvikuru purofiti. Zviri nyore sei kungopa Coca-Cola dambudziko redu rekufutisa pane kuita kuti vana vedu vashande nemabasa ekunze, kuisa pasi mafoni edu, kuenda kujimu, kana kudya zvine hutano. Isu tinopa mhosva yepasi rose chigadzirwa kushambadzira pachinzvimbo chekushanduka kwemabasa anoda mashoma kana kushaya simba.
Inowanikwa kune chero kushambadzira iri zano rekuyedza kuita kuti vanhu vazhinji vatenge zvakawanda zvechigadzirwa chako kazhinji. Ini handitendi kuti kushambadzira kunochinja, asi ini ndinonzwa sekuti vanhu vari kutora zvishoma uye zvishoma zvine chekuita nezvavanoita. Wese munhu anoziva kuti soda hachisi chinwiwa chinopa kune mararamiro ane hutano. Handidi Coca-Cola kundiudza izvozvo… asi ndinofara kuti vari kuudza munhu wese ari kuvarwisa chokwadi nezve chigadzirwa chavo.
Nenzira, ... ndaive nemagirazi eCoke nezuro manheru, uye aishamisa. Nhasi, ndadya chikafu chamangwanani chine utano, ndakacheka zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvemanheru, uye ndakadya kudya kwemanheru zvine hutano. Mangwana ndiri kuronga kukwira bhasikoro rangu (ndarwadziwa nhasi mushure mekutasva kekutanga mumwedzi svondo rapfuura). Ini handidi Coca-Cola kana hurumende kuti indiudze ini ndinofanira kutora garo rangu pabhasikoro iro mangwana.
Ini ndakakora, handisi benzi.
Mutengo Wehurombo Webhu Kuita
Manage Akawanda Zviitiko zveWordPress neManageWP
Jan 21, 2013 pa 8: 46 AM
Yakanaka post Doug! Kushanda pakuva akangwara uye hutano kwandiri mwedzi mishoma yapfuura uye mu2013 futi. Hezvino zvekuve wakangwara uye uine mutoro uye usapusa uye kupomera zvese zvimwe asi isu pachedu!
Ah, uye ini ndakazvipira kukwira RAIN 2013 chiitiko nemukoma wangu muna Chikunguru. Nekudaro, ini ndichave ndichiwana chigaro chidiki chinorwadza prepping yeiyo futi.
Jan 21, 2013 pa 9: 10 AM
Zvikuru! Rombo rakanaka!!!
Jan 21, 2013 pa 9: 51 AM
Smart nzira, senguva dzose, kubva kuCoke. Rinondiyeuchidza nezve kubhejera - "tamba zvine mutsindo". Pamwe, ichi chinyorwa chinoenzanisira hunhu hwenyu hunodakadza: kuve wechokwadi uye pachena. Kunze kwekuti iwe uri mushambadzi akangwara, hunhu uhwu hunokusiyanisa zvachose kubva kurongedza uye zvinobatsira mukubudirira kwekambani yako. Iwe uri anonakidza mukomana, VaDoug.
Jan 21, 2013 pa 10: 12 AM
Ndatenda @ twitter-9755792: disqus!
Jan 24, 2013 pa 9: 02 AM
Ini ndini munhu anonyunyuta mukamuri anoshuvira dai vangadai vakaita izvi makore makumi matatu apfuura pane kushushikana nezvekuwana mafuta kubva papundutso? Uye ini ndinogara ndichivenga kutanga kusahadzika nekuti chokwadi chekuti DK yadzoka pakurwisa kick yakanaka.
Zvakanaka kuti Coke arikuita kushambadzira kwehutano kwakanaka - asi panguva imwechete ndinofunga imhaka yekuti pane mari mairi kune vanhu vari muAtlanta. Soda inokupa simba rinokurumidza uye inokudzora nemvura panguva imwe chete ndosaka usingakwanise kana kumbowana imwe. Zvirinani handikwanise. Izvo hazvisi kugadziriswa. Izvo zviri kutaurwa ndezvekuti vanhu vanogona kuverenga macalorie uye vanwe zvakanyanya Coca-Cola uye vatore macalorie kubva kumwe kumwe - senge Chokoreti kana kuenda ne cheeseburger pachinzvimbo cheBig Mac @ McDonalds.
Hapana ngirozi mukushambadzira, asi kurwa kwako kwakarurama uye ndinokukoshesa, 'bromance.